Ungatanga Sei Kudonhedza Bhizinesi 2021 - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Ungatanga Sei Kudonhedza Bhizinesi 2021
Ungatanga Sei Kudonhedza Bhizinesi?
Heano mamwe mapfupi matipi ekukubatsira iwe kutanga rako chairo kudonhedza bhizinesi.
Pane nzira mbiri dzaunogona kutora kana uchisarudza niche. Kana kutengesa kuri kukoshesa kwako zvakanyanya saka kubheja kwako kwakanyanya kuita kutsvagurudza. Ziva mhando dzezvigadzirwa izvo zvinogara zvichidikanwa uye tsvaga nzira kwayo yekuburitsa izvo zvigadzirwa kune yakasarudzika demographic. Imwe nzira ndeyekutarisa zvinhu izvo zvaunoshuvira zvechokwadi. Kana iwe uchitoziva zvigadzirwa zvakanakisa zvinotenderedza chairo kufarira, saka zvingave zviri nyore kwazvo kuwana iyo niche. Kuva neruzivo rwakajeka rwemhando dzevatengi iwe dzauri kuyedza kunongedza dzichakubatsira iwe kuti utengesere zvakare pasi mutsetse.
Paunenge uchinge uine zano rekuti vatengi vako ndivanaani uye ndezvipi zvigadzirwa zvavanogona kutenga, kuchenjera kufunga kuti uchaendesa sei zvigadzirwa kwavari. Mune mamwe mazwi, iwe unofunga sei kuisa chiratidzo chebhizinesi rako? Iwe haungatenge zvishongo zvakaisvonaka kubva kune munhu akasarudzika pakona yemugwagwa? Kana vatengi vangango vatenge zvigadzirwa kubva pawebhusaiti zvinotaridzika zvakafanana nevamwe vese. Iwe unofanirwa kumira kubva kune wese munhu uye nzira yakanakisa yekuita izvozvo kugadzira Branding Guideline. Une mucherechedzo kana imwe nhovo nhaurwa yauchazoshandisa? Ndeapi marongero ewebhusaiti yako, ndeapi mafonti anonyatsoratidza mhando yako? Ora yega yega inouya mune yakajairwa kurongedza? Izvi ndizvo zvinhu zvese zvekutarisa kana uchivaka Brand Guideline.
3.Find Vakavimbika Vanopa
Vatengesi vaunosarudza vanozoita kana kutyora mhando yako, saka zvakakosha kuti iwe usarudze zvichienderana nekuvimbika. Iyo yepamusoro iwe yauri mukutengesa cheni inoraira kuti yakafara sei margin ako margines angave. Kureva kuti vanhu vashoma vari pakati pako nemugadziri vanozobvumidza purofiti yakakura. Iwe ungangoda kuchenesa zvigadzirwa izvo zvatove mukugadzirwa, zvichireva kuisa logo yako pane chigadzirwa chakatogadzirwa. Kana iwe ungangoda kuviga zvakavanzika chigadzirwa. Zvinoreva kuti iwe une chinhu chetsika chakagadzirwa chete kune yako marangi. Kana iwe unongoda kungotengesa zvigadzirwa kubva kune yako webhusaiti uye hapana chimwezve. Chero zvazvingava, mutengesi wako ndiye achange achitumira zvigadzirwa izvi panzvimbo yako. Naizvozvo zvakakosha kuti ubvunze kuti ndeipi nzira yekutumira inoshanda zvakanyanya kune iwe nevatengi vako.
Parizvino, pane zvikamu zvina zveDropshipping Maitiro: ezvokutengeserana kuratidza kuburitsa, China post, yakakosha mutsetse, uye yekunze imba yekuchengetera. Chekutanga pane zvese, sarudza yakakodzera nzira yekutakura zvinoenderana nehunhu hwechigadzirwa (saizi, mhando, nezvimwewo). Chechipiri, nzira dzekutakura dzinofanirwa kuenderana neyakaenzana yekutumira, zvinodiwa pakubvisa tsika, uye kugona kwenzvimbo dzakasiyana dzemusika. Chekupedzisira, vanodonhedza pasi vanofanirwa kunyora zvese hunhu hweyakapihwa nzira dzekutumira kune vatengi, sekureba kwazvinogona kutora uye kupi zvigadzirwa zviri kutumirwa kubva.
5. Vaka webhusaiti yako
Zvino izvo zvese zvehunyanzvi zvinhu zvabuda munzira, apa panouya chikamu chinogadzira chekumhanyisa rako bhizinesi. Rangarira iyo Branding Guideline yambotaurwa, ikozvino ndiyo nguva yekuisa iyo ruzivo mukushandisa. Izvo zvakakosha kuti utore gwara rako kana uchigadzira yako webhusaiti nezvayo zvese zvinhu. Izvi zvichave nechokwadi chekuti brand yako inowana yepamusoro nhanho yekuenderana. Mukupedzisira, iwe unoda kuti webhusaiti yako itaridzike sehunyanzvi sezvinobvira. Izvo zvakanyanya mukana wekuti mutengi akwanise kuvimba newe pameso echiso, ndipo paunowana mukana wekutengesa. Iyo nhanho yebasa revatengi iwe yaunopa ichave nechokwadi chepamusoro chekuchengetedza mwero. Nepo kushambadza kwako nekuvimbika kuchakwevera vatengi vatsva mukati. Ive neshuwa yekugadzira mapeji anonyatso taura ruzivo rwako rwekuonana, Kudzoka, uye zvakavanzika marongero pamwe neyakajairika FAQ peji.
6.Traffic uye Kushambadzira
Kushambadzira ndiyo inogadzira mari muiyi indasitiri uye iwe unogona kungoenda kusvika ikozvino kuburikidza neshoko remuromo. Izvo zvakakosha kuti uve neruzivo rweSEO paunenge uchigadzira yako chitoro. Saka nenzira iyoyo injini dzekutsvaga dzinofarira webhusaiti yako kana mazwi akakosha ari kushandiswa nevanogona kuve vatengi. Iwe unogona kusarudza kugadzira bhurogu kuchitoro chako kuti utyaire kutyaira traffic kune ako zvinyorwa. Asi nekure nzira inoshanda kwazvo yekutora chitoro chako pamberi peziso rerudyi ndeyekuziva Facebook kushambadza. Isu tinokurudzira zvikuru kuti iwe upedze imwe nguva uchitsvaga hwaro hweiyo Facebook Ad Maneja. Izvo zvinoshora zvinobatsira kutumira vanhu chaivo kuwebhusaiti yako. Uye zvinoenderana nekuti webhusaiti yako yakagadzirirwa sei uye mashambadziro anobudirira sei anozotarisa yako shanduko, kana kuwanda kwaunoita kutengesa.
Ramba uchifunga kuti mazhinji e-commerce zvitoro zvine mwero wekushandura we 1-2%. Izvi zvinoreva kuti kune vese vashanyi zana iwe unenge uchizotengesa kamwe kana maviri. Naizvozvo kuwanda kwetraffic kwaunogona kutyaira kuchitoro chako, zvakanyanya mukana wekushandura kutengesa.
Hello ndinoda kutengesa shopu yangu. Kana wafarira ndiudze. Ndokumbirawo vanhu vanofarira chete ndinoda mari yekubhanga pandinokupai Unique Wear Shopwomen. Ndinoshanda naCj dropshing. ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Ko bulk review inorevei chaizvo kana uchinyora? Zvinofanira here kubatanidza kudzokorora kwakawanda paunenge uchinyora? ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Mhoroi ndine mubvunzo wekuti imarii yandinofanira kutanga kushambadza ndine chitoro chinotengesa zvizorwa Andi ndoda kuziva ndinoda kushambadza ndine 300$ ndeipi ads nzira yandinofanira kushandisa ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Basa reCJ riri sei? Pane munhu anogona kugovera chimwe chiitiko here? ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Ndokumbirawo mumwe gwara
Ndeupi musiyano pakati pekugadzirisa nguva uye nguva yekutumira muCj?
Nguva yekutumira inosanganisira iyo 1-3 mazuva ekugadzirisa nguva? ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Tags cjdropship, cjdropshipping, cjdropshipping shopify, dropshipping, maitiro ekuwana mutengesi wekudonhedza, nzira yekuita mari paIndaneti, kutanga sei kudonhedza bhizinesi, kutanga sei kudonhedza, makemoneyonline, shopu kudonhedza
← Yakabudirira Kesi, kubva kuDropShipping kuenda kuBranding - Shapermint → Nzira yekusarudza sei Domain Domain Saiti Yako?